A Wanderer's Notebook: မယ်ဥတောင်
Blog နဲ့ အဆက်ပြတ် နေသလို ဖြစ်တာတော်တော်လေးကို ကြာသွားပြီ ။ 3rd Year ရောက်လို့စာတွေကလည်းများ ၊ မြန်မာပြည်က ပြန်လာစမို့ ဖတ်လက်စ စာအုပ်တွေကလည်း များတော့ စာရေးတဲ့ ဘက်ကိုမလှည့်ဖြစ်တော့ ဘူး ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ရေးထားတာကို Typing ပြန်ရိုက်ပြီးတင်မယ် ၊ တင်မယ်နဲ့ တော်တော်နဲ့ကို မတင်ဖြစ်သေးဘူး ဖြစ်နေတယ် ။ သည်တစ်ခါတော့ အချိန်မရမကယူ ရင်းတင်လိုက်ပါတယ် ။ ( Third Year ချင်းအတူတူတောင် မပျင်းတဲ့ Blog တွေကစာအသစ်တွေ တင်လို့ :D )
ကျတော်တို့ နိုင်ငံမှာ အခြေမခိုင်တော့တဲ့ တက္ကသိုလ် ပညာရေးကြောင့် ခုနောက်ပိုင်းမှာတတ်နိုင်တဲ့ လူငယ်တွေဟာ လက်လှမ်းမှီရာ နိုင်ငံခြားကျောင်းတွေမှာ အလုအယက်တိုးဝှေးပြီး ပညာရှာကြတာ များလာပါတယ် ။ နောက်တစ်ခေတ်မှာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရမည် ဆိုတဲ့လူငယ်တွေ ၊ ဦးနှောက်ကောင်းမျိုး ဆက်သစ်တွေဟာ (Brain Flow) ဦးနှောက်စီးဆင်မှု အရ အခြားနိုင်ငံ တွေကို စီးဆင်းကုန်ကျတယ် ။ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတာ က "အစာဝတော့ ဌာနပြန်" ဆိုတာ မဟုတ်ဘဲ တတ်နိုင်တာနဲ့ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသား အဖြစ်ခံယူ ရင်း တိုင်းတစ်ပါးမှာ တစ်သက်လုံးနေသွားဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထား ကြတာများပါတယ် ။ သည်လို ဖြစ်ရတာဟာ သေချာတွေးကြည့်ရင် သည်ဘူတာပဲဆိုက်မှာ ဖြစ်လို့ သိပ်တော့ မပြောချင်လှပါ ။
အထူးသဖြင့် သည်လို ခေတ်ပြိုင် လူငယ်တွေအနေနဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ ပညာသင်ထွက်ကြတော့ မရင့်ကျက်သေးတဲ့ နုနယ်တဲ့ နှလုံးသားမှာ ဒါဏ်ရာရကြပါတယ် ။ ဟိုမှာကျန်ခဲ့တဲ့ ချစ်သူကို လွမ်းတာတို့ ၊ မသေချာသေးတဲ့ ရည်ရွယ်သူအတွက် စိတ်မချ ၀မ်းနည်းရတာတို့ ၊ အဝေးကချစ်သူကို ပစ် အခြားအသစ်တစ်ယောက်ကို ချစ်မိတာတို့ ၊ မရင့်ကျက်သေးတဲ့ မိန်းကလေးများဖို့ မိဝေးဖဝေးလွတ်လပ်ရာမှာ ချစ်သူကို ကိုယ်လုံးပုံယုံ မိလို့ ဒုက္ခရောက်ကြရတာတွေ အများကြီးပါ ။ Rဇာနည်ရဲ့ "ကိုယ့်အနားရှိစေချင် " တို့ ၊ မိုးမိုး ရဲ့ "ဆာယိုးနာယာ" တို့ဟာ သည်လိုလူငယ်တွေရဲ့ ခေတ်ပြိုင်ဝေဒနာကို ထင်ဟတ်ပြတဲ့ သီချင်းမျိုးတွေပါ ။
အဲသည်အတွေးနဲ့ ရေးထားခဲ့တဲ့ ၀တ္ထုတိုတပုဒ် တင်ချင် လာပါတယ်။ ၀တ္ထုတို ဆိုပေမဲ့ ရှည်နေလို့ အပိုင်း (၂) ပိုင်းခွဲတင်ပေးပါ့မယ် ။
(ဒုတိယ ပိုင်းကို စာရိုက်လို့မပြီးသေး :P )
ညို့ညို့ဆိုင်းဆိုင်း …. ၊ မှိုင်းဝေတောင်တက်ပြန်တော့ …
မြူခိုးလေးတွေ ဘေးကရှက်လို့ ၊ တောင်တန်းတစ်ဖက်တစ်ချက် … ၀န်းကာရံကာပင် …
သခင်မမှာ … ဟိုအရင်ဘ၀တုန်းက … ခင်ပပသို့အသွင်……
သနားစရာ့ ရင်ခတ် ၊ သရဖီ … အခွေခွေပင်…….
ယခုတိုင်ပဲ ဒိဋ္ဌမြင် ….. ပုံတော်အစစ်ကိုမြင်ရပြန်တော့.. သခင်မ
ကျေးဇူးရှင်ရယ်…. နေညိုနု … ရွှေလိုရှု …
ကျနော့်ရှေ့ကအညာနွေ နေပူကြဲတောက်မြင်ကွင်းကို မျက်ကွယ်ပြုလိုလျှင်တော့ မျက်လုံးအစုံကို မှိတ်ထား ရန်မှတပါး အခြားနည်းလမ်းမရှိပါ ။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်ကို ချွတ်လိုက်တော့ ခေါင်းမှာလည်း ချွေးတွေ ရွှဲရွှဲနစ်လို့ ။ အိမ်မှာခဏပြန်နေသခိုက် မိဘကဟိုနား သည်နား သွားခိုင်းတိုင်းနေပူလိုက်တာဗျာလို့ အကြောင်းပြတတ်သော ကျတော်သည်ခုတော့ မန္တလေးမှ ၁- နာရီကျော်ကြာကြာ ဆိုင်ကယ်စီးသွားရသော သခင်မတော်သို့ မွန်းလွဲညနေ ၃ နာရီကျော်ကျော်လောက်တွင် အပြင်းနင်း၍ လာခဲ့သည်။
ကြာနီကန်ရွာလေးသည် ကျတော့် နောက်ဖက် ဖုံတောထဲတွင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီ ။ ညနေစောင်းဆိုတော့လည်း အိမ်ရှေ့မင်းထန်းတောဆီ အားသွန်နှင်နေကြသည့် ကား ၊ဆိုင်ကယ် မျိုးစုံပေါ်မှ
ကိုကြီးကျော်ရဲ့ သားတော်ကြီး ၊ သားတော်ငယ်တို့ ကိုလည်းမကြာမကြာ ကျော်တက် ၊ နောက်ချန်တွေ့ရ၍ သည်လမ်းတစ်ကြောမှာတော့ လူသိပ်မပြတ်လှ ။
သခင်မတောင်ခြေမှာတော့ စက်ဘီး သုံးလေးစင်းရပ်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ မျက်စိရှေ့မှ တောင်သည် ညို့ညို့ဆိုင်းဆိုင်းလည်းမရှိပါ ။ သစ်ပင်တွေ ခပ်ကြဲကြဲပေါက်နေသည့် တောင်စောင်းပတ်လည် ၊ သစ်ပင်ရိပ်နည်းနည်းရှိဟန်တူသည့် ခပ်လုံးလုံးတောင်ထိပ်သည် လွမ်းတတ်သူတို့အဖို့တော့ လွမ်းလောက်ပါပေသည် ။ လူသူကင်းမဲ့ဟန်တူသည့် လှေကားရှည်ကို မြင်နေရသည်မှာပင် အထီကျန်ဆန်လှစွာ လွမ်းဖို့ကောင်းနေပါသည်။ ကျောက်ဆိုင်ကျောက်တုန်းများနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသော ခပ်မို့မို့ တောင်တစ်လုံးသည် ကျတော်အသည်းနှလုံးကို သိမ်းကြုံး ၍ ညှို့ယူနေလေပြီ ။
လူသူကင်းသော တောင်တက်လမ်းတွင် ကျနော်တက်လှမ်းလျက် ရှိပြီ ။ ပူ၍ အနည်းငယ်အေးစက်သည်ဟု ခံစားရသော ခြေလှမ်းများတစ်လျှောက်တွင် မျှော်လင့်သော အိပ်မက်တစ်ခုသည် တစ်စတစ်စ ကြီးထွားလာသည်။ သည်နေ့ သူလာရမည် ။ သခင်မတောင်ကို သူလာရမည် …..။
လှပသော မိန်းမသားတစ်ဦး၏ မလှပသော ဇာတ်လမ်း နှင့်ပတ်သက်သည့်နေရာ ။
ခပ်ဖြေးဖြေးတတ်နေသော ကျနော့်မျက်လုံးတို့ေ၀၀ါးသွားချိန် ……. ။
ချစ်သူ့အသားအရေ နှင့်လိုက်ဖက်မည့် ရက်ကန်းထည်ကို ရက်လုပ်နေသော မိန်းမလှလေးတစ်ဦး ၊ ခေါင်းကဆံကေသာမှာလည်း သရဖီပန်းကုံးလေးကို ရစ်ခွေပန်ဆင်ထားသည်။ မယ့်အတွက်မူသရဖီပန်းသည့် သ စ္စာပန်းပွင့်လေးများပင် ….. ။ ညိုမောင်းကြံ့ခိုင်သော ပျို့မောင်ကြီးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး မယ်ကိုတိုင်ရွေးချယ်ရက်လုပ်နေသည့် ပုဆိုးအတောင်နှစ်ဆယ်အစ ပြီးရန်သိပ်မလိုတော့ ။ မောင်ကြီးအောက်ပြည် အောက်ရွာမှ ပြန်မလာမှီတော့ ပြီးလောက်ပါသည်လေ။
မယ့်ရင်ဝယ် မယ်ချစ်သူတစ်ဦးသာ အရိပ်ပမာမခွာရှိ၏ ။ မယ့်ကို ပိုးပန်းခဲ့သော ၊ မောင်ကြီးနှင့် ပုဆိုးတန်းတင်အကြင်လင်မယား ဖြစ်သည့်တိုင် ပိုးပန်းကြဆဲဖြစ်သော ဂုဏ်ကြီး ၊ ဂုဏ်ငယ် ၊ မင်းခယောက်ျား ၊ အသည်သားမကျန်…. မယ့်စိတ်ကို ယိမ်းယိုင်အောင်မည်သူမျှ မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါ။ မောင်ကြီးနှင့်မယ် သစ္စာ တိုင်ခဲ့သော သရဖီပန်းလေးများသဖွယ် မယ့်အချစ်တို့သည် မွှေးမြနေဆဲ ။
“ဝေါင်း” ခနဲ “ဝေါင်း” ကျားဟိန်းသံသည့် ရက်ကန်းခက်သံညံညံကြားဝယ် ကျယ်ဟိန်းပြီးထွက်လာသည်။ မေ့မျောသွားရမတတ် ညှီဟောင်ဟောင်အနံ့အသက် ၊ စူးရှကြမ်းတမ်းသောကိုက်ချီ မှုတစ်ခုဝယ် မယ့်ကိုယ်လေးသည် ပေါ့ပါးစွာ ၊ ရုန်းကန်နိုင်မှုပင်မရှိဘဲ ပါသွားတော့သည်။ အဲသည်နောက်မှာတော့ ၀ုန်းဒုံးခနဲလဲပြိုကျသံတွေ ၊ တောင်ပြုန်းရွာသူ ရွာသားတွေရဲ့ စိုးရိမ် ကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်သံတွေ စီခနဲနေအောင်ကြားလိုက်ရသည်။
“ကိုရင်မောင့် မိန်းမ မရွှေဥ ကျားချီသွားလို့တဲ့ဟေ့ ။” ………
ခပ်သင်းသင်းမွှေးနေတဲ့ ပန်းရနံကြောင့် အသက်ငွေ့ငွေ့သာကျန်တော့သော မမယ်ဥ သတိပြန်ဝင်လာပြန်သည် ။
အလေ့ကျပေါက်တဲ့ခပ်နီနီရဲရဲ ပန်းပွင့်သေးသေးလေးတွေ …..။
ခပ်ဝါးဝါးမြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းထဲမှာ…… ကျားရဲ့ကျောပေါ်က ရှံနီစထောင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ပါလား။
မယ့်အသိစိတ်အာရုံတွင် သင်း၏ အာဏာရှင်ဆန်စွာအနိုင်အထက် သိမ်းပိုက်လိုသည့် သင်းအကြံအစည်အားလုံးကို လည်းသိပြီ ။ တောင်ပြုံးရွာကို အပိုင်စားရသည်ဆိုပြီး အာဏာနှင့်အရာရာကို ရအောင်ယူနိုင်သည်ဟု ပိုင်ပိုင်တွက်ထားသည့်သင်းမျက်နှာထား ။
တောင်ကြားက လူသူမနီးတဲ့တောအုပ်ထဲမှာ စေတီငယ်တစ်ဆူ၊ ကျားတစ်ကောင်ပေါ်က ရှံပန်းနီစနှင့် ယောက်ျားတစ်ဦး ၊ ဖျော့တော့သည့်တိုင် … ထီမထင်မျက်နှာနှင့် မိန်းမငယ်တစ်ဦး ။ မိန်းကလေးခေါင်းမှာ ကြိုးပြေစပြုနေတဲ့ သရဖီပန်းကုံးလေးတစ်ကုံး ။ ကျားပေါ်ကလူကလည်း ချော့တစ်လှည့်၊ ချောက်တစ်ချည်နှင့် မေးလိုက် ၊ မိန်းကလေးကလည်း ခေါင်းတစ်ခါခါနှင့် အပြင်းအထန်ငြင်းဆန်လိုက် ။ နောက်တော့ ရှံပန်းနီလူက ဒေါသထွက်ဟန်ဖြင့် နောက်ဆုံးအကြိမ် စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ကာ ပြတ်သားစွာမေးသည် ။ မိန်းကလေးက လည်းတည်ကြည်စွာ ငြင်းဆန်လိုက်ရင်း စေတီငယ်ဖက်မျက်နှာလှည့်လိုက်ကာ မျက်စိကိုမှိတ်ဘုရားကို အာရုံပြုဆုတောင်းနေလိုက်သည် ။ ကျားပေါ်ကလူက ပိုင်းဖြတ်ဟန်ဖြင့် စီးတော်ကျားကို မျက်ရိပ်ပြလိုက်သည် ။
သည့်နောက်တွင်မူ ကြည့်ရက်စရာမရှိသောမြင်ကွင်းတစ်ခု ။ သွေးအလိမ်းလိမ်းနှင့် မိန်းမငယ် ၊ ကျားပါးစပ်မှ အသားနှင့် သွေးညှီနံ့ ။ ဒါပေမယ့် မမယ်ဥရဲ့ ခေါင်းထက်မှာ တစ်ပွင့်စီပြေကျလာတဲ့ သရဖီပန်းလေးများကတော့ မွှေးရနံ့ သင်းပြန့်နေဆဲပင် ။ အသက်သွေးနှင့်ပျိုးခဲ့တဲ့ မိန်းမသားတစ်ယောက်ရဲ့ သစ္စာပန်းပွင့်တွေ ။
သရဖီနံ့ သင်းသင်းလေး ကျနော့်နှာဝတွင် မွှေးပျံနေသည် ။ တပေါင်းလမှာလည်း သရဖီပန်းပွင့်သတဲ့လား ။ ကျနော် သေချာချာမသိပါ ။ အင်ကျင်ရွာမပါအ၀င် သခင်မတောင်တော်နီးမှာ ပျိုဖြူတို့ နှစ်စဉ်တန်ခူးလဆန်း (၄) ရက်နေ့တွင် ပန်ဦးပန်းဖျားကို မမဥသခင်မအတွက်ပန်တော်ပန်းဆက် ဓလေကိုတော့ ကြားဖူးခဲ့သည် ။ ပန်တော်ပန်းမြတ် သရဖီကို စုံဂဏန်းကျအောင်ရွေုးပြီ ကလပ်နှစ်ခုတွင် ဖက်စိမ်းခံကာ ပူဇော်ပသကြသည့် ဒေသခံတို့၏ “စုံဖက်” ပညတ်ကိုလည်း မှတ်သားဖူးသည် ။ မမဥသခင်မနှင့် သူ့ချစ်သူကိုရင်မောင်တို့ ဘ၀တိုင်း စုံဖက် နိုင်ကြပါစေလို့ ရည်ရွယ်တင်လှူခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း ရှင်းပြခံရဖူးသည် ။
ကျနော်သရဖီပန်းကို ခူးချင်၊ ကောက်ချင်သော်လည်း “ပန်းသစ္စာ” စူးမှာကိုကြောက်၍ မကောက်ဖြစ်တော့ ။ သူလာရင်ရော ။ သူသာရောက်လာပြီး ပန်းပန်ချင်တယ်ဆိုပါက ၊ မမဥရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ရော ၊ ဒေသစွဲတွေကိုရော ဖျောက်ဖျက်ကာ မောင်ကောက်ပေးပြီး သူ့ခေါင်းမှာပန်ပေးလိမ့်မည် ။ သူသည် မောင့်အတွက် သည်မျှပင်အရေးကြီးသူ ဖြစ်၏ ။ သူနှင့် ပတ်သက်လျှင် ကျန်တာဘာမှ အရေးမကြီး … ။ ။
ပင်စွယ်မြိုင်နန်း ပန်းကရင်မက်တွေက … ဝေေ၀လွင်လွင် …
ပင်ဝယ်ကြိုင်လန်း …. အင်ကြင်းပန်းတွေက… ဝေေ၀လွင်လွင်….
မဆုံသူများ ရောက်ကြရင် လွမ်းသလို… ဆွေးသလို ငိုချင်သလောက်ပင်…
မုန်းချစ် စိမ့်လှပါတယ် ….. လိပ်ပြာတောင်ငယ်သေးပင် အဝေးကပဲမကြည့်ချင်…
တောစံပယ်ပန်းလေးက… ဘေးအကျ.. မွှေးလှတယ်ရှင်
သည်ညနေသူလာရမည် ။ သူ့ကိုချိန်းခဲ့တုန်းက အင်းမလုပ်၊ အဲမလုပ် နေခဲ့သည့်တိုင် သူလာတော့လာရမည် ။ ငယ်စဉ်ကပျိုးခဲ့သော မေတ္တာသည် ခိုင်ကြည်တတ်ပါသည် ။ သူ့အပေါ် ချစ်သော ကျတော့် သစ္စာကို ကျတော်ယုံသည် ။
ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀ထဲက သူသည်ကျတော့် သူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့၏ ။ သစ်ပင်တတ်ဖက် ၊ ထမင်းအိုးတမ်း ဟင်းအိုးထမ်းကစားဖက် ၊ စွန်လွှတ်ဖက် ၊ လောက်စာလုံးလုံးဖက်ဖြစ်သည် ။ နောက်တော့ စာကျက်ဖော်လည်းဖြစ်ခဲ့သည် ၊ စာပြိုင်ဖက်လည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ စိတ်ကူးယဉ်တတ်ပြီး သူဌေး ဖြစ်အောင်ကြိုးစားချင်သောကျတော်နှင့် ၊ လက်တွေ့ကျပြီး ပညာတတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားချင်သော သူတို့သည် အယူအဆအားဖြင့် ဆန့်ကျင်ရန်ဖြစ်ကြသည်မှာလည်း မဆန်းပါ ။ ဒါပေမယ့် ကျတော်တို့သည် ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်တည့်လိုက် သူငယ်ချင်းမျိုးဖြစ်ခဲ့ကြသည် ။
ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်မတူကြသူတို့သည် တစ်နေ့တွင် လမ်းခွဲသွား ကြရမြဲ ဓမ္မတာမှာမဆန်း ။
ဆယ်တန်းဟူသည် ဘ၀၏လမ်းစုံဖြစ်သည် ။ ဆယ်တန်းပြီးနောက် မြန်မာပြည်တွင် သူဌေးမဖြစ်နိုင်ဟု ယုံကြည်နေပြီဖြစ်သော ကျတော်သည် တိုင်းတပါးရေခြားမြေခြားတွင် ပညာသင်ပြီး စီးပွားရှာရန်ကြံသည် ။ D များစွာပိုင်ရှင်သူက ဆေးကျောင်းတတ်မည်ဟုဆိုသည်။ သူလောက်အမှတ်မများသည့်တိုင် ယောက်ျားလေးတစ်ယောက် ဖြစ်သောကျတော်ကဆေးတတ်နိုင်အောင်တော့ အမှတ်မှီခဲ့သည် ။ ကျတော်တို့နှစ်ယောက်အပြိုင်အဆိုင်ငြင်းခဲ့ကြပြီး နောက်ဆုံကိုယ့်ယုံကြည်ချက်အတွက်ကိုယ့်ဘက်မှ အလျော့မပေးနိုင်ခဲ့ကြချေ ။ ရည်မှန်းချက်မတူကြသောကျတော်တို့နှစ်ယောက်သည် ခေါင်းမာအလျော့မပေး တတ်ကြသည်နေရာမှာတော့ တပ်တူ တူခဲ့ကြသည် ။ နောက်ဆုံးတော့ လမ်းစုံမှာအပြုံးနှင့်လမ်းခွဲ ခဲ့ကြသည်။ ကျတော်ကလည်း နိုင်ငံခြားထွက် ။ သူကလည်း သူယုံကြည်ရာလမ်းကိုလျှောက်သည် ။ တစ်သက်လုံးတွင် ပြန်လည်တွေ့ဆုံနိုင်ရန်ပင် အခွင့်အလမ်းနည်းချေပြီ ။ ငယ်သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ညောင်ညိုပင်ရိပ်အောင်မှာ မပြုံးနှင့်လမ်းခွဲ နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပြီ ။ ဒါပေမယ့် ခက်သည်မှာ သည်အချိန်ကြမှ ကျတော်သူ့ကို အရူးအမူးချစ်မိသွားခြင်းဖြစ်သည် ။ ။
အကယ်၍ အရွယ်ရောက်ပြီး အပျိုလူပျို ချစ်ကြ၊ ကြိုက်ကြတာ မဆန်းဟု ဆိုကြရိုးဆို လျှင် ငယ်စဉ်ကပေါင်းလာ ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း ချစ်မိဖို့ရန် ဘေးတွန်းအား တစ်ခုခုတော့လိုသည်ဟု ဆိုရပေလိမ့်မည် ။
ပြည်ပရောက်ပြီးနောက် ကျတော် သူ့ကိုမကြာမကြာဖုန်းဆက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရှင်းရှင်းပြောရလျှင်တော့ ကြွားချင်တာရော ၊ မသိစိတ်ကသူနှင့် စကားပြောချင်နေတာရော ညီတူညီမျှပါဝင်နေပါသည်။ နောက်တော့ သူ့အကြောင်း အခြားသူငယ်ချင်တွေဆီကနေ သတင်းတွေကြားလာခဲ့ရသည်။ သူ့ကို လိုက်တဲ့ Senior တွေအကြောင်း ၊ နားလည်ပေးတဲ့သူရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေရောပေါ့ ။ သိသိချင်းတော့ ငါသူငယ်ချင်းသူ့လို မိန်းကလေးမျိုးတောင် ရည်စားတွေဘာတွေ ရနေပြီပဲလို့ သာမာန်ထက်မပိုခဲ့သောလည်း နောက်ပိုင်းတွင် ပြောမပြတတ်သော ဝေဒနာသည် နေရာယူလာတတ်တော့သည် ။ လောကတွင် ခံစားသူကိုယ်တိုင် သေချာရေရာ စွာမသိသောဆွတ်ပျံ့ခြင်းရောဂါသည် တော်တော်ရင်နာစရာကောင်းပါသည်။ ခံရလည်းခက်ပါသည် ။
မဖြစ်နိုင် . ။
သူတစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်သည်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင် ။ သူ့ကို ငယ်ငယ်တည်းက ခင်သည့်သူငယ်ချင်း ဘ၀တစ်လျှေက်လုံးတွင် သူ့ကို ရည်းစားမထားဖို့တားဖူးသည် ။ ငယ်ငယ်ထဲက ကျတော်ညီမတစ်ယောက်လို ခင်မင်ရင်နှီးသော သူ့ကို ကျတော်ပိုင်သည်။ ခုတော့ သူ့ကို ကျတော်ထက်အတွင်းကျ ရင်းနှီးစွာ တစ်စုံတစ်ယောက်က ပိုင်ဆိုင်ပေတော့မည် ။ဘာကြောင့်လည်းဟု မသေချာသော်လည်း ထိုသိနားလည်မှုသည် အတော်ကြီးကို ရင်နင့်ဖွယ်ကောင်းလှသည် ။ နောက်ပိုင်းတော့ ဖုန်းဆက်တဲ့ရက်တွေ စိပ်လာသည်။ ဖုန်းပြောလျှင်လည်း ရင်ပိုခုန်လာသည်. ။ နောက် ကြားက သူ့လူအကြောင်းကို တွေးမိပြန်တော့လည်း စိတ်တွေ ရောက်ရက်ခက်ရပြန်တော့သည် ။
“ကျတော့်ကို ဥပေက္ခာမပြု ပါပြုပါနဲ့ကွာ ။ ကျတော် တစ်စုံတစ်ခုသော အတိုင်းအတာ အထိမင်းအတွက် အရေးပါ ပါရစေ “ ။ တတ်နိုင်လျှင် သူ့အနီးမှာ ထိုင်ပြီး ဖွဲ့နွဲ့ ပြောပြချင်သည် ။ မဆုံးနိုင် သော အိပ်ပျက်ညများ ၊ စာဖတ်မရဘဲ စာအုပ်ကိုင် ငိုင်ရသော နေ့များ ၊ မတင်မကျ ဝေဒနာ ရဲ့ အဆုံးစွန်သော ခံစားရမှုတွင် ပထမအကြိမ် မူးယစ်ဝေသီသော နွေနှောင်းညတစ်ညမှာ အချစ်နာကျယောက်ျား တစ်ယောက်၏ ထက်သန်သောပေါက်ကွဲမှု အဖြစ်သူ့ကို ကျတော်ဖွင့်ဟ ပြောခဲ့တယ် ။
“ငယ်ရယ် ကျတော်မင်းကို ချစ်တယ် ။ သိပ်ကို ချစ်တယ်ကွာ ”
တိတ်ဆိတ်သော တစ်ဒင်္က ရဲ့အဆုံးမှာ ကျတော့် ရင်မှာစွဲနေသော နူးညံ့တဲ့စကား သံကိုကြား၏ ။
“ငါ့မှာ ချစ်သူရှိ …….”
ရဲဆေးတင်ထားသော ယာမကာ၏ အစွမ်းလား ၊ ရင်ကို ထိုးနှက်လိုက်တဲ့ သူ့စကားရဲ့အစွမ်းလား မဝေခွဲနိုင်သော်လည်း အိပ်ယာပေါ်သို့ ခွေလဲကျသွားသည် ။ ချစ်သူရှိတယ်တဲ့လား .။ ယောက်ျားတစ်ယောက် ရဲ့ ပထမဦးဆုံး အချစ်အဖြစ်ဖွင့်ဟ မှုတွင် ရှုံးနိမ့်ရခြင်း ။ ရှုံးနိမ့်တဲ့ နှလုံးသား၏ ပြန်လည်နိုးထရှင်သန်ခြင်းတွင် ရင်လှိုက် နာကြည်းမှုတစ်ခုတော့လိုပါမည် ။ ဒါပေမယ့် သူသည်နာကြည်းစရာ တရားခံတစ်ယောက်မဟုတ်ပါ ။ “ဘယ်သူ မပြုမိမိမှု” ဆိုသော ဆိုရိုးစကားကို ကြားဖူးသည်မှာ ကြာပြီ ။ တစ်ခါမှ ဤမျှလောက် အဓိပ္ပာယ်မလေးနက်စဖူး ။ နောင်တ ဆိုသည့် စကားလုံးများကို တစ်ခါမျှ သည်လောက် မမုန်းစဖူး ။
ပြီးခဲ့သော အချိန်တို့ကို နာရီလက်တံလှည့်၍ ပြန်ယူရမည်လား ။ ပြက္ခဒိန် အဟောင်းများမှ ရှာဖွေယူ ရမည်လား ။ နောက်ပြီးတော့ ဘ၀ဆိုတာ တစ်နေရာရာမှ ပြန်စလို့ ဖန်တီးခွင့် ရှိရဲ့လား ။ ကျတော်လည်း သည်နိုင်ငံကို မလာဖြစ် ။ ဆရာဝန်လောင်းလောက်တော့ဖြစ် ။ သူနဲ့ အကြိုတ်အနှယ် ညင်းခုံ ။ ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်တဲ့လိုက်ဖြစ် ။ Anatomy ကိုအတူတူလေ့လာ ။ ဆပ်ဗလီတွေ ထိရင်နဲ့ “သည်နှစ် မအောင်ရင် နောက်နှစ်” ဘာညာနဲ့ သီချင်လုပ် သီဆို ဟစ်ကြွေးနေမလား ။ ဒါမှမဟုတ် သူလည်း သည်ကိုလိုက်လာ ၊ စင်းကလိပ်ကို ပြော ၊ Circuit တွေ ၊ Voltages တွေကြားမှာ နစ်မြုပ် ၊ ရုပ်ရှင်တွေ အတူတူကြည့်လို့ …. ။ သည်လိုသာ ညှိယူလို့ ရစတမ်းဆိုရင် ဘ၀များစွာအတွက် ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ပေးလို့ ညှိယူထားလိုက် ချင်ပါသည် ။
ဒါပေမယ့် သည်လိုမဖြစ်နိုင်သည့်တိုင် ကျတော်လက်မလျော့ပါ ။ ချစ်သူရှိခြင်းသည် အိမ်ထောင်ကျခြင်းမဟုတ် ။ သည်တစ်ခါကျောင်း ပိတ်လို့ အိမ်ပြန်ရင် သူ့ကို တွေ့ဖြစ်အောင်တွေ့ ရမည်။ မောင်သူ့ကို ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်း ပြောရမည် ။ မည်သို့ပင်ချစ်စေ သူ့ ကိုချစ်သော အချစ်သည် တစ်စုံတစ်ရာကို စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်လိမ့်မည် ဟူကျတော်ယုံပါသည် ။
စိတ်ကူးယဉ်တတ်ပြီး သူဌေး ဖြစ်အောင်ကြိုးစားချင်သောကျတော်နှင့် ၊ လက်တွေ့ကျပြီး ပညာတတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားချင်သော သူ